KU XAD-GUDUBKA XASAANAD DHAQAMEEDKA EE HAATAN! W/Q: Eng Xuseen Adan Cige (Deyr);
Wednesday October 09, 2019 - 08:03:24 in Wararka by Wariye Tiriko
MADALAHA DHAQANKA ee ay Bulshadu ku kulmi jirtay (nooc kasta iyo meeqaam kasta oo ay ahaayeenba) waxa si weyn looga taxadiri jiray in hadalada iyo weedhaha la isku dhaafsanayo Madashaa iyada ah aanay noqonin kuwo abuura aafo iyo fidmo
ummadda kala dila.
Ummadda Somaliland waxay dhaqan soo jireen ah u lahaayeen in wixii Gar iyo Gole- fadhiisi ah; ama Cabasho, Canaan iyo Dhalliil ah; ama Talo, Toosin iyo Waano ah ay isugu gudbin jireen sifo quman oo ku habboonaa ama waafaqsanaa dhaqankeena
suubaniyoqaab-nololeedka Bulshada. Hufnaanta, Dhawrsanaanta, Anshaxa iyo Tilmaamaha wacan ee uu lahaa Dhaqanka Ummadda reer Somaliland waxaynu tusaale u soo qaadan karnaa sida ay Xilli iyo Xaalad walba, Madal iyo Gole kasta u lahaayeen hadallo, HAB-MAAMUUS iyo
ASLUUB u gaar ah oo ku habboonaa Madasha xilligaa la joogo.
Waxa mar walba reebanaa in meel lagaga dhaco Cirdiga, Sharafta, Magaca, Maamuusta iyo Karaamada ay leeyihiin qofka, qoyska, jifada, beesha, qabiilka iyo bulshada nolol-wadaagta ah. Xataa haddii ay Madashaa iyada ahi kulmisay dad ay
xurgufi dhextaalo ama iyagu dhexdooda wax kala tabanaya, waxa mar walba reebanaa in lagu xad gudbo MILGAHA iyo SHARAFTA uu dhaqankeenu!!
MAXAA KU DHACAY HAYBADII IYO HAN-FOGAALKII UU DHAQANKEENU LAHAA?? Waqtigan xaadirka ah MADALAHA LAGU KULMO NOOC KASTA OO AY YIHIINBA; ha
noqoto mid Dhaqan oo kulmisay laba reer sida Meherka, mid Farxadeed sida Qalin- jabinta Ardayda, mid Bulsho, mid Ganacsi &amp; Dhaqaale, mid Siyaasadeed, mid Suugaaneed iwm; waxaad arkaysaa sida loo caadaystay in si joogto ah loogu xad-
gudbo XASAANAD DHAQAMEEDKA.
Waxa muuqata in haatan laga leexday oo meel la iska dhigay Milgihii, Maamuustii, Haybadii iyo Han-fogaalkii uu lahaa Dhaqankeenii QANIGA ahaa. MADAL kasta oo lagu kulmo waxa ka soo baxa hadallo aan loo meeldayin oo deel-qaaf iyo meel-ka-
dhacba ku ah dhaqanka iyo milgaha aynu ummad ahaan leenahay. Sidoo kale, hadallada haatan ka soo baxa MADALAHA lagu kulmo waxay macno tireen Maamuustii iyo Haybadii Xafladaha iyo ujeedadii loo qabtay Munaasibadaa iyada ah.
KU XAD-GUDUBKA JOOGTADA AH EE XASAANADA DHAQANKU WAXAY HALIS KU
TAHAY HAYBADII IYO HAN-FOGAALKII UU DHAQANKEENU LAHAA!